ကြိုက်တာရွေးပါ Burma / Myanmar | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ကြိုက်တာရွေးပါ Burma / Myanmar
ကြိုက်တာရွေးပါ Burma / Myanmar
Posted by ဦးေၾကာင္ၾကီး on May 23, 2011 in Critic, History, Myanma News | 27 comments
ဒီနေ့ ဘီဘီစီ၊ အာရ်အက်ဖ်အေ သတင်းတွေမှာ အမေရိကန် ဒြုလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို မြန်မာစစ်တပ် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး ပြန်လည်ကောင်းမွန်ချင်ရင် အမေရိကန်ဖက်က ဘားမားဆိုတဲ့ နာမည်အစား မြန်မာလို့ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲဖို့ တောင်းဆိုတယ်လို့ မြန်မာတိုင်းမ်းဂျာနယ်ကို ကိုးကား ဖေါ်ပြထားတာ တွေ့ပါတယ်။ တိုင်းပြည်အမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားနေတာ ကြာပါပြီ။ ကိုယ့်အသက်အရ သိမှီတာကိုပြောပါဆိုရင် ၁၉၈၈ခုနှစ် စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး ကထဲကပါ။ တရားဝင်အမည်ကို ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ် သမတ မြန်မာနိုင်ငံကနေ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံလို့ ပြောင်းခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်။ အခုတော့ ပြည်ထောင်စု သမတ မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ အနောက်တိုင်း သိုးဆောင်းစကားနဲ့ဆိုရင် အရင်က Burma နောက်ပိုင်းမှ Myanmar ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အမည်တောင် ကွဲကွဲပြားပြား မသိဘူးလားလို့ အပြစ်တင်လည်း ခံရမှာပါပဲ။ ကုလားကြီးနဲ့ အရာကြီးဖြစ်လို့ စိတ်မဝင်စားပါဘူး။
စစ်အစိုးရ အတိုက်အခံများနဲ့ အနောက်တိုင်းအစိုးရများက ဘားမားလို့ အာဏာမသိမ်းခင်ကအတိုင်း ဆက်ခေါ်ပါတယ်။ တရုပ်၊ အာစီယံ၊ ဂျပန်နဲ့ စစ်အစိုးရနဲ့ ပလဲနံပါတ်သင့်သူများ၊ ရူးချင်ယောင် ဆောင်သူများ၊ ခြံစီးရိုးခွထိုင်သူများက မြန်မာလို့ပြောင်းလဲခေါ်ပါတယ်။ ပြည်သူအများစုကတော့ ဘာခေါ်ခေါ် သိပ်ဂရုစိုက်မယ် မထင်ပါဘူး။ သူတို့လိုလားတဲ့ ခေါင်းဆောင်၊ ပါတီက ဒီလိုကောင်းသဟေ့ဆို ကောင်းလိုက်မှာပါဘဲ။ အများစုကို အနည်းစုက ထိန်းချုပ်တာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ဖြစ်နေကြပါ။ ပြည်တွင်းမှာ အခြေအနေအရပ်ရပ်ကြောင့် မြန်မာလို့ ခေါ်နေရတာကိုတော့ နားလည်ပေးရပါမယ်။
နိုင်ငံရေးနိုးကြားမှု မရှသူများအတွက်တော့ ပြသနာမရှိပေမဲ့ ကွက်ကျော်နိုင်ငံရေးမှာတော့ အရေးပါတဲ့ ကိစ္စတရပ်ပါ။ နိုင်ငံရေးလက်ဦးမှုနဲ့ ဆိုင်ပါမယ်။ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းအပြီးမှာ တိုင်းပြည် သယံဇာတတွေကို တရုပ်၊ ထိုင်း၊ စင်္ကာပူတို့ကို ထိုးကျွေးပြီး ဒေသဆိုင်ရာနိုင်ငံများရဲ့ အသိအမှတ်ပြုမှုကိုယူတယ်။ အစိုးရတရပ်ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ တည်ရှိမှုအနေနဲ့ သူအုပ်ချုပ်ရာ တိုင်းပြည်အမည်နာမက အရေးကြီးလာပါတယ်။ ဒေါ်စုနဲ့ အတိုက်အခံတွေက သူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုကို အသိအမှတ်မပြုတဲ့အနေနဲ့ မူလအမည်အတိုင်း ဆက်သုံးပါတယ်။ တချို့ပညာရှင်တွေပြောတာ မြန်မာဆိုတဲ့ နာမည်ကပဲ မူလအခေါ်ဘားမားထက် ပိုရှေးကြတယ်၊ ပိုမှန်တယ်လို့ ရေးတာတွေလည်းရှိတယ်။ ဘားမင်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလည်း ကြားဖူးပါတယ်။
စစ်အစိုးရက မြန်မာဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ် တွင်ကျယ်ဖို့ စီမံချက်ချ ဆောင်ရွက်ပါတယ်။ ဗမာ၊ ဘားမား ဝေါဟာရပါရင် စာစောင်တွေမှာ ငွေမှင်နဲ့အဖျက်ခံရတဲ့အထိ ပြင်းထန်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ စာပို့စနစ်မှာဆိုရင်လည်း လိပ်စာတပ်တဲ့အခါ ဘားမားလို့များပါခဲ့ရင် စာပြန်အပို့ခံရတာ၊ စာဖျောက်ဖျက်တာ လုပ်ပါတယ်။ တချိန်မှာဆို Myanmar (Burma) လို့ သုံးရင်တော့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ဘောင်မဝင်ပါဘူး။ နိုင်ငံတကာ ထုံးစံအရ အာဏာ လက်ဝယ်ရှိသူကို အစိုးရလို့ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင် ထိတွေ့ဆက်ဆက်နိုင်အောင် သတ်မှတ်ထားလို့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ကို defecto အမိန့်အာဏာနဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရလို့ သတ်မှတ်ထားပြီး နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ မြန်မာလို့ အက္ခရာစဉ်အလိုက် ထည့်သွင်းပေးပါတယ်။ ယူအက်စ်အစိုးရနဲ့ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာတော့ ဘားမား လို့ပဲ ရှာမှရပါတယ်။ ဥပမာ ဒီဗွီကံစမ်းမဲ။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကတော့ ဘားမားလို့ အသိများပေမဲ့ အများစုက နှစ်မျိုးစလုံး မသိကြပါဘူး။ ဘားမားဆိုရင် ဘဟားမား၊ ပနားမား၊ အယ်လ်ဘားမား စတဲ့ တိုင်းပြည်၊ ပြည်နယ်တွေနဲ့မှားသလို မြန်မာဆိုလည်း မကြားဘူးလို့ ရမ်းသမ်းပြီး မလေးရှားထင်သူ အများကြီး ရှိပါတယ်။
ပြည်ပမှာ သာမန်အားဖြင့် ဘားမားလို့ခေါ်ရင် အတိုက်အခံ၊ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ၊ မြန်မာဆိုရင် စစ်အစိုးရလူလို့ ခွဲနိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများနဲ့ ဆွေးနွေးတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာပါ။ နိုင်ငံရေး စိတ်မဝင်စားသူများကတော့ မြန်မာလို့အလွယ် သုံးပါတယ်။ ကျနော်တို့လည်း ကိုယ့်အချင်းချင်းဆို မြန်မာလို့ အသုံးများပါတယ်။ မိတ်ဆွေ တိုင်းရင်းသားများလည်း မြန်မာလို့ အရောင်အသွေးမပါ သုံးလေ့ရှိပါတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ မှီတင်းနေထိုင်သူအားလုံးက ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တယ်လို့ သတ်မှတ်လို့ အားလုံးကိုခြုံငုံ ကိုယ်စားပြုတဲ့ နာမည်ကို ကြိုက်တာ မဆန်းပါဘူး။
စစ်အစိုးရအဆက်ဆက်ရဲ့ ဆင်ခြေကတော့ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအတွက် အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ နာမည်ကိုသုံးရတာပါ။ လက်တွေ့မဆိုထားနဲ့ သူတို့အပြောမှာပဲ တမျိုးနဲ့တမျိုး မညီတာတွေ အများကြီးပါ။ ဥပမာ -အာဏာသိမ်းပြီးတော့ နိုင်ငံ၊ အစိုးရအမည်ကို ပြောင်းတယ်၊ နိုင်ငံအလံ၊ အစိုးရအဖွဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေကျတော့ မဆလလက်ထက် အတိုင်းပါ။ နိုင်ငံရေးအရ ငါတို့သည် အပေါ်ယံကြောသာ ပြောင်းရတာ၊ အနှစ်သာရအားဖြင့် မူလအတွေးအခေါ်၊ မူလသခင်၊ မူလအကျင့်အကြံအတိုင်းလို့ စိတ်ဓာတ် ရေးရာ ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်၊တိုင်း ဥက္ကဌတွေက မဆလလက်ထက် ဒေသဆိုင်ရာပါတီ ကော်မတီ ဥက္ကဌရာထူးပါယူထားတဲ့ စစ်တိုင်းမှူးတွေပါ။ ပထစ ပါလီမန်ခေတ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေကို လွှတ်တော်အမတ်လို့ သုံးပါတယ်။ မဆလ လက်ထက်ကျတော့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဖြစ်သွားပါတယ်။ ဆိုရှယ်လစ်လူ့ဘောင်သစ် တည်ဆောက်တဲ့အခါ ခေတ်နဲ့မညီတဲ့ အတွေးအခေါ်ဟောင်းတွေကို စွန့်ပယ်ခဲ့တာလို့ အကောင်းမြင်နိုင်ပါတယ်။ အခေါ်အဝေါ်တင် နိမ့်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ လုပ်ပိုင်ခွင့် အာဏာတွေပါ မရှိတော့တာပါ။
စစ်တပ်အစိုးရ လက်ထက်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းအတိုင်း ဆက်လက် သုံးစွဲပါတယ်။ ပြောစရာရှိတာ ခေတ်နဲ့ညီအောင် လုပ်တာဆိုရင် နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်မှာ အစိုးရကိုယ်စားပြုရန် စေလွှတ်ခန့်အပ် ထားခံရသူများကြတော့ ဘာလို့ သံအမတ်လို့ သုံးနေရတာလဲ။ သံကိုယ်စားလှယ် မဖြစ်သင့်ဘူးလား။ ကိုယ့်လူအမတ်ဖြစ်မှ ဘိက်သိက်ခံ နန်းတက်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ ဗေဒင်နမိတ်ကြောင့်လား၊ အစီအစဉ်ရှိရှိနဲ့ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်နေတာလား ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ….
ယုံကြည်မှု စတင် တည်ဆောက်ဖို့ အမေရိကန်ကို မြန်မာပြော
မြန်မာ-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်ဖို့ဆိုရင် ‘Burma’ ဆိုတဲ့ အခေါ်အဝေါ် အစား နိုင်ငံရဲ့ တရားဝင် နာမည်ဖြစ်တဲ့ ‘မြန်မာ’ ကို သုံးစွဲတာမျိုးက အစ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ကြဖို့ လိုမယ်လို့ မြန်မာဘက်က ပြောဆိုခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
အမေရိကန် အာရှ- ပစိဖိတ်ဆိုင်ရာ ဒုတိယ လက်ထောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ဂျိုးဇက်ယွန် နဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏ္ဏမောင်လွင်က အဲဒီလို ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက်ကို ကိုးကားပြီး ပြည်တွင်းထုတ် မြန်မာတိုင်းမ် ဂျာနယ်က ရေးသားလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရေးမှာ အမေရိကန်ရဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ထားမှုက အကြီးမားဆုံး အဟန့်အတားကြီး ဖြစ်နေကြောင်း၊ နှစ်ဘက်ဆက်ဆံရေးမှာ ကြိုတင် သတ်မှတ်ချက်တွေကို မြန်မာဘက်က လက်ခံမှာ မဟုတ်ကြောင်း၊ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့ လိုကြောင်း၊ ဒါမှသာ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့ပြင် နှစ်နိုင်ငံ အပြန်အလှန် လေးစားကြောင်း ပြသဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိ တရားဝင်နာမည် ဖြစ်တဲ့ ‘မြန်မာ’ ဆိုတဲ့အမည်ကို သုံးစွဲဖို့လည်း မြန်မာဘက်က တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာ သံအမတ်ကြီးဟောင်း သခင်ချန်ထွန်းက အခုလို ပြောပါတယ်။
‘တချို့ကတော့ အရင်တုန်းက ခေါ်တဲ့ ‘Burma’ ကို အမှတ်တမဲ့ သဘောပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ခေါ်ကြပြောကြတဲ့ သဘောမျိုး ရှိတာပေါ့။ လူတွေ အသက်ကြီးမှ နာမည်ပြောင်းတဲ့ သဘောမျိုးပါပဲ။ ဗမာအစိုးရ အနေနဲ့ကလည်း ဒါက လက်မခံနိုင်ဘူး၊ သို့သော်လည်း အမေရိကန် အစိုးရ အနေနဲ့က ခုနက ပြောတဲ့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ၂ ထောင်လောက်ကို အမြန်ဆုံး လွှတ်ပေးပါ ဆိုတဲ့ တောင်းဆိုချက် ရှိနေတော့ ဒီတောင်းဆိုချက်ကို ဘာမှ မဖြစ်စလောက်နဲ့ တနှစ်အောက် သဘောမျိုးသာ လွှတ်တယ်ဆိုတော့ နိုင်ငံရေးသမား မပါသလောက်ပဲ၊ ၂ ထောင်လောက်မှာ လေးဆယ် ငါးဆယ်လောက်ပဲ ပါတယ်။ ဆိုတော့ အမေရိကန်ကလည်း ဆက်ပြီးတော့ လုပ်နေကျအတိုင်းပေ့ါဗျာ၊ အရင်တုန်းက နာမည်ဟောင်းကို ပြန်ပြီး ခေါ်တဲ့သဘောမျိုးပါ’
အမေရိကန် အစိုးရကတော့ မကြာခင်ကပဲ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု သက်တမ်းကို နောက်ထပ် တနှစ် ထပ်တိုးလိုက်ပြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း အခြေအနေတွေ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာမှသာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်နိုင်မယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
Miandian (မြန်သရန့်) လို့ပဲ ခေါ်မယ် …
Miandian မြန်သရန့်ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလုံးပေါင်းကိုကြည့်ရတာ တရုတ်တွေက ကျုပ်တို့သာကီနွယ်ဝင် မဟာမြန်မာတွေကိုakind of Indian လို့များ မှတ်တမ်းတင်ထားကြလား မသိဘူးနော်။ တချို့အိန္ဒိယကုလားတွေက မြန်မာပြည်ကို သူတို့လက်အောက်ခံတိုင်းပြည်တခု ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ မှတ်ကြတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးကို နားလည်တဲ့ လူရည်လည်ကုလားတွေကတော့ သူတို့အချင်းချင်းပြန်ထိန်းတာကို သတိပြုမိတယ်။ သူတို့ရာဇဝင်သမိုင်းထဲမှာ မြန်မာပြည်ကို သူတို့ရဲ့နယ်ပယ်တခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သလား၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုလိုနီခေတ်မှာ အင်္ဂလိပ်တွေက မြန်မာပြည်ကို အိန္ဒိယရဲ့ ပြည်နယ်တခု အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့တာကို ရောထွေးနေသလား မသိဘူး။ တရုတ်ကြီးလည်း မြန်မာပြည်ကို သူတိုလက်ဝေခံ တိုင်းပြည်တခုအဖြစ် ရှေးကထဲက သတ်မှတ်ထားတယ်ထင်တယ်။ အိန္ဒိယနဲ့ တရုတ်သမိုင်းကို သိသူများ လုပ်ကြပါအုံး…
မဝေတို့ အမျိုးတွေကို တရုတ် လို့ခေါ်လို့ မြန်သရန် လို့ ပြန်ခေါ်တာလား…:)
နိင်ငံခြားသား တော်တော်များများမေးဘူးတယ် ဗမာ နဲ့ မြန်မာ ဘာကွာလဲတဲ့ ..
မြန်မာဆိုတာ နိင်ငံ အမည် လို့ ဗမာ ဆိုတာ လူမျိုးအမည်လို့ ဖြေ လိုက်တယ်…လွဲနေရင်လဲ တည့်ပေးကြပါအုံး
နိုင်ငံခြားသားမျိုးစုံနဲ့ ဆုံခဲ့ဖူးတယ် … ဘယ်နိုင်ငံကလဲဆိုတာ ရှင်းပြရတာ အတော်ခက်ပါတယ် … ဆွေမျိုးပေါက်ဖော်တရုတ်တွေကိုတော့ မြန်သရန့်လိုပြောလိုက်ရင် ကိစ္စပြီးပေမယ့် ကျန်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကတော့ burma လဲ မသိ၊ myanmar လဲ မသိလေ …
ဒါဆိုရင် ပြောပြလို့မှ မရရင်
ကမ္ဘာမှာ အလှဆုံး မြေပုံပိုင်ရှင် နိုင်ငံကပါလို့ အဟီး
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနေတဲ့ တိုင်းပြည် ဒါမှမဟုတ် ဦးသန့်နေတဲ့ တိုင်းပြည် လို့ပြောရင်ရပါတယ် ဒါမှမဟုတ် မဝေက သူတို့ကိုမသိတာလား ;)
ကျွန်မက မြန်မာဖြစ်ရတာ အလွန်ဂုဏ်ယူသော ဗမာလူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် … မြန်မာပြည်ကို သူများတွေကိုမိတ်ဆက်ရတာခက်ခဲခဲ့ပေမယ့် ကျွန်မကြောင့် သူတို့တော်တော်များများ မြန်မာပြည်ဆိုတာဘယ်မှာလဲ .. မြန်မာလူမျိုးဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ သိအောင်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ် …
ချာတူးလန်က စချင်စိတ်နဲ့ ရေးလိုက်တာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်မစိတ်ဆိုးတယ် ….
ကျွန်တော်ကတော့ ဘာ အရောင်အသွေးမှ မရှိဘူး ဒါပေမယ့် နိုင်ငံ အလုံးစုံ ခေါ်မယ်ဆိုရင် မြန်မာကို ပိုသဘောကျပါတယ်။ ရှိသမျှလူမျိုးနွယ်စု အကုန်ကိုယ်စားပြုတယ် ခံစားမိပါတယ်။ ဗမာဆိုတာက ဗမာ လူမျိုးနွယ်စုကို ဆိုလိုတယ်ထင်ပါတယ်။ ဗမာလူမျိုး ကအများစုဖြစ်နေပေမယ့် ဗမာတွေရဲ့ နိုင်ငံမဟုတ်ပါ။ လူမျိုးအားလုံးပါတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံပါ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်ကတော့ Myanmar ပါခင်ဗျား။ ကျွန်တော် ဗမာလူမျိုးပါ။
အမတ် လို့သာ သုံးသင့်ကြောင်း။
သံအမတ် ၊ တတိယ အတွင်းဝန် တော့လုပ်နေပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်ထဲ ကိုယ့်စကားရှိရက်နဲ့ ရှုပ်အောင်လုပ်နေကြတယ်။
ကိုယ့်စာပေ တွင်ကျယ်ဖို့ မပျောက်ပျက်ဖို့က နေ့စဉ်သုံးတွေ ရုံးသုံးတွေကလည်း မကလက်ဖို့၊ မကြောင်ဖို့၊ ရှည်လျားထွေပြားမနေဖို့ လိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေးကိုတော့ နားမလည်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ မြန်မာနိုင်ငံသား ဗမာလူမျိုးလို့ ခံယူထားပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတွေ မေးရင်လည်း အဲဒီလိုပဲဖြေပါတယ်။ ဗမာဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ မျိုးနွယ်စုတွေထဲ က တစ်စုပါ။
ကျနော့်အမြင်ကတော့ ဘယ်လိုပဲခေါ်ခေါ်သိပ်ထူးမယ်မထင်ပါဘူး၊ အခေါ်အဝေါ်ကအရေးမကြီးပါဘူး၊ အနှစ်သာရကသာ အရေးကြီးတာပါ၊ မြန်မာဆိုတဲ့ အသံထွက်ကအနောက်တိုင်းသားတွေ အနေနဲ့ အသံထွက်ရတာခက်တယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေက ရှင်းထားတာလား ရှုပ်ထားတာလား ပြောရတော့ခပ်ခက်ခက်
ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်တောင်ကျေးခလေးဘဝတုန်းက ဆိုရင်
ဒီတွက် တိုင်းရင်းသားစုပေါင်းကို မြန်မာလူမျိုးလို့ခေါ်တာကတော့
ဒီတွက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးလုပ်လိုက်တော့လည်း အရှုပ်တစ်ခု ရှင်းသွားတာပေါ့နော
ဆိုတော့ကာ နောင်အနာဂတ်လူသားတွေနဲ့ နာမည်ထပ်ပြောင်းရင်
တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ကုန်ကျမဲ့ ရုံးသုံး ကျောင်းသုံး အထွေထွေသုံး စာရွက်စာတမ်းတွေ
အလံတော်တွေ ဘာတွေညာတွေ သာရကာတွေ
ကွိတွေကွတွေ ပြန်တွက်ရင် အလုပ်လဲရှုပ် ပိုက်ဆံလည်းကုန်ပေါ့
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နောက်တစ်နှစ် ပိတ်ထားတာကို ကျုပ်ကတော့ သဘောကျတယ်
သူတို့တစ်ခါဖွင့်တိုင်း မြန်မာ့သယံစာတတွေက ကုန်
အလုပ်အကိုင်ထက် သူတို့ခိုးထားတာတွေ တရားဝင်ဖြစ်
ဒီတော့ကာ ခင်ဗျားတို့အိမ်ရှေက သစ်ကိုင်းလေးတစ်ကိုင်းကို
လမ်းဧရိယာနဲ့မလွတ်လို့ အခုတ်ခံရရင် ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲဘယ်လိုနေမလဲ
ဘယ်နိုင်ငံကလဲ ဆိုရင် အနီးအနား နိုင်ငံကတောင် မသိကြဘူး။ တရုတ်နဲ့ တွေ့ရင် ယူနန်နဲ့ ကပ်နေတဲ့ နေရာ မြန်သရန့် လို့ ပြောရင် ရေးတေးတေး..
တချို့ဆို သိကိုမသိတာ.. ဘယ်ကစရှင်းရမှန်းတောင် မသိဘူး.. အနီးအနားက တရုတ် အိန္ဒိယ ထိုင်းနဲ့ ကပ်နေတယ် ဆိုတော့.. အင်းအင်း လို့ ခေါင်းငြိပ်တာပဲ ရှိတယ် သိမသိတော့ သိဘူး။
ဘယ်လိုဘဲဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ ခနခနနာမည်တွေပြောင်းနေတာတော့သဘောမကျပါဘူး၊ နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာလည်း ဒီလိုခနခနပြောင်းတာမတွေ့မိပါဘူး
။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကထဲက ခေါ်ဝေါ်ခဲ့တဲ့ လမ်းနာမည်တွေကိုလည်း ခုချိန်အထိ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလျှက်ရှိကြပါတယ်၊ ဒီမှာတော့ သူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာ သူတို့ပြောင်းခဲ့တဲ့ နာမည်တွေကို မှတ်တမ်းကျန်ရစ်စေချင်ပုံ ရပါတယ်၊ လူတွေမှာတောင် နာမည်မကြာခနပြောင်းဖို့ မသင့်ပါဘူး၊ နိုင်ငံ၊ လမ်း၊ ဒေသ တွေဆိုရင် ပိုပြီးမပြောင်းသင့်ပါဘူးခင်ဗျာ။
အောင်ဆန်းစုကြည် သို့မဟုတ် စုကြည်
( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို နိုင်ငံခြားသားတွေက ဒေါ်တတ်ပြီးမခေါ်ကြဘူး
တော်နေ သူတို့မေမေ ကို အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုပြီး ဒေါ်မတတ်ဘဲခေါ်ပါတယ်ပြောပြီး
အခြား မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ သတင်းတွေရယ်
ဥပမာ ဘုန်းကြီးတွေကို ထုတာတို့
နာဂစ်မှာ အကူညီတွေတွက် နိုင်ငံခြားသားတွေကို အဝင်မခံတာတို့လိုမျိုးသတင်းတွေမှာ
ဒီတော့ အားလုံးကို ပြန်ပြီး သုံးသပ်လိုက်ရင်
လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်တော့ ( ( ကလေးသူငယ် နှင့် စွန့်အ မသန်စွမ်း ဉဏ်ရည်ပြည့်မှီသူတွေမပါ )
အထူးသဖြင့် ယနေ့ အိုင်တီခေတ်ကြီးမှာ
မြန်မာ သို့မဟုတ် ဗမာ နိုင်ငံကိုမသိတဲ့လူဟာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတော့
နွားတွေက စာပေသတင်းတွေကို မဖတ်တတ်မလေ့လာတတ်ကြဘူး
ဒါ့ကြောင့် မြန်မာ သို့ ဗမာကို မသိတဲ့လူတွေက
အခေါ်အဝေါ်ဆိုတာ ပညတ်ပဲ … ကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ အသံထွက်အတိုင်း ခေါ်ကြတာပဲ … ကျွန်မတို့လဲ ချိုင်းနားကို တရုတ်ပြည်လို့ပဲခေါ်တာပဲ … သူတို့ဘာသာစကားအတိုင်း zhong guo (ကျုံးကော်) လို့ပြောရင် မသိဘူးလေ …
ကျွန်မဆိုရင်လဲ အာဖရိကတိုက်က နိုင်ငံတွေအားလုံးကို မသိဘူး … သူငယ်ချင်းရှိတဲ့ နိုင်ငံလောက်ပဲ မှတ်မိတယ် … ကျွန်မတို့လဲ တကမ္ဘာလုံးက နိုင်ငံတွေကို အားလုံးမသိနိုင်သလို … ကမ္ဘာပေါ်ကနိုင်ငံအားလုံးက လူအားလုံး မြန်မာဆိုတာကို မသိနိုင်တာ မဆန်းပါဘူး …
ကမ္ဘာကျော်အောင် တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ burma ပဲဖြစ်ဖြစ် myanmar ပဲဖြစ်ဖြစ် လူသိများလာမှာဖြစ်ပါတယ် …
( ချာတူးလန်က စချင်စိတ်နဲ့ ရေးလိုက်တာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ကျွန်မစိတ်ဆိုးတယ် ….)
လေကီသားပေမို့ ဖြစ်တဲ့စိတ်ကို မတားကောင်းပါခင်ဗျ
ဉဏ်ကနေပြီး သင့်၏ မသင့်၏ဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပြီး ပယ်ပါခင်ဗျ
ပြောလို့သာပြောတာ စိတ်ဆိုးတဲ့သူဟာ ရုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောကြတယ်
ကျွန်တော်ကတော့ စိတ်ဆိုးဘူး :D:D:D
Burma လို့ခေါ်ခေါ်… Myanmar လို့ခေါ်ခေါ်.. အရေးမကြီးလှပေမယ့်..
မြန်မာကို ပိုပြီးနှစ်သက်ပါတယ်. ဘာကြောင့်ဆို… တိုင်းရင်းသားတွေ အားလုံးပေါင်းထားလို့လေ..
နိုင်ငံအနေနဲ့က မြန်မာပေါ့… ဘယ်လူမျိုးလာလာ..
မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရင်.. မြန်မာနိုင်ငံသား စိတ် ရှိရပါမယ်..
အဲ… အဲဒီ မြန်မာလို့ အခေါ်ခံချင်တဲ့ လူ့ကန့်လန့်ကြီးတွေကလည်း တမျိုး..
ကလေးကျနေတာပဲ.. သူ့ကို Burma လို့ခေါ်ရင်ပဲ.. စိတ်ကောက်လိုက်မယ်ဆိုတာ ကတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး…
သူ့ အရှုပ်ဇာတ်ကို ဖြေရှင်းပေးရင်.. သူခေါ်စေချင်သလိုခေါ်မှာပဲ…လေ..
စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့ခံရတာကိုတော့ မကြိုက်ပါဘူး..
ဝယ်ရတော့လည်း.. တစ်ဆင့်ခံ.. ရောင်းရပြန်တော့လည်း တစ်ဆင့်ခံ..
ဘာမဆို.. အောက်ဈေးနဲ့ ရောင်းနေရပြီး.. ဝယ်ရတော့ အဆမတန်..
သစ်လည်း ဈေးကောင်းမရ.. ကျန်တာတွေလည်း ဈေးကောင်းမရ…နဲ့..
တောင်သူတွေလည်း စိုက်ပြီး ပျိုးပြီး.. ဘယ်ရောင်းရမှန်းမသိလို့ ရှုံးရတာ အခါခါ
ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်.. စီးပွားရေးတံခါးများကိုတော့ ဖွင့်စေချင်ပါတယ်..
ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုတော့.. တတ်နိုင်သလောက် ကြည့်လုပ်ရမှာပေါ့..
ခုလည်း ဘာထူးလည်းဗျာ.. ဟိုတယ်ကအစ… ဖုန်းဆားဗစ် ကအဆုံး.. ရေအားလျှပ်စစ်အလယ်.. ရေနံတွင်းများ အပါအဝင်… ကျုပ်တို့ဟာ ဘာများ သိပ်ရှိလို့လဲ…
ဒီနိုင်ငံကို ရောင်းမယ့်ရောင်း.. ဈေးကောင်းရအောင် လေလံပစ်ပြီးရောင်းတာ ပိုကောင်းမယ်..
တော်ကြာ.. ဈေးကွက်မဖွင့်ရလို့.. အောက်ဈေးနဲ့ ရောင်းလိုက်ရမှ ပိုဆိုးမယ်..
Myanmar လို့ခေါ်ခေါ်.. Burma လို့ခေါ်ခေါ်.. ကိုယ်တိုင်က ဂုဏ်သိက္ခာရှိအောင် နေနိုင်ရင်.. ကိုယ်က ခေါ်စေချင်သလို ခေါ်ကြမှာပါ… (သူများကြတော့.. ယိုးဒယားလို့ ခေါ်နေပြီး)
အဓိက ပြဿနာက Myanmar ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို တရားဝင်သတ်မှတ်တဲ့ အစိုးရဟာ လူထုက စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်တင်ထားတဲ့ အစိုးရ မဟုတ်လို့ပါဘဲ။
ဒေါ်စု ဦးဆောင်တဲ့ NLD ကသတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ရင် လူထုကလိုက်မယ်ဆိုတာ ယုံမှားဘွယ်မရှိကြောင်းပါ။
( ဘယ်နိုင်ငံကလဲ ဆိုရင် အနီးအနား နိုင်ငံကတောင် မသိကြဘူး။ တရုတ်နဲ့ တွေ့ရင် ယူနန်နဲ့ ကပ်နေတဲ့ နေရာ မြန်သရန့် လို့ ပြောရင် ရေးတေးတေး..
တချို့ဆို သိကိုမသိတာ.. ဘယ်ကစရှင်းရမှန်းတောင် မသိဘူး.. အနီးအနားက တရုတ် အိန္ဒိယ ထိုင်းနဲ့ ကပ်နေတယ် ဆိုတော့.. အင်းအင်း လို့ ခေါင်းငြိပ်တာပဲ ရှိတယ် သိမသိတော့ သိဘူး။ )
မြန်မာ ရဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံ က လူတွေ Burma ဒါမှ မဟုတ် Myanmar ကို မသိတာ၊ ရေး တေးတေး ဖြစ်ရတာ တော့ လွန် မယ် ထင်တယ်။
ဒါမှ မဟုတ် ကျောင်းစာ မသင်ရတဲ့ သူတွေ လား၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ နိုင် ငံ ကျောင်သင်ခန်းစာ မှာ ပထဝီ ဝင် ဘာသာရပ် မရှိတာလား၊
ဒါမှ မဟုတ် သူတို့ နိုင် ငံ ပြဌာန်း ပထဝီ ဝင် မှာ သူတို့ နိုင် ငံ ရဲ့ တည်နေရာ၊ အကျယ်အဝန်း၊ နယ်နိမိတ် ကို မသင်တာ လား။ စဉ်းစားစရာပဲ နော်။
ဆူး လည်း အဲဒါ တွေးနေတာ.. သူတို့ ပထဝီ ကောင်းကောင်း မသင်ရတာလား မသိဘူးလို့ အမြဲတွေးမိတယ်။ သူတို့ သင်ရိုးညွန်းတမ်းကိုတော့ ကိုယ်မှ မသိတာ.. မှန်းလို့ပဲ ရမယ်လေ။
ပထဝီမသင်လို့မဟုတ်ဘူး .. ဘာသာစကားအခက်အခဲကြောင့်ပါ … ကိုယ်ပြောတဲ့ စကားအသံထွက်ကို သူတို့ကနားမလည်တာ .. သူတို့ဆီမှာ သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ မြန်မာကိုခေါ်တဲ့ သီးသန့်နံမည်တွေရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ် … အဲဒါကြောင့်လဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဦးရေအများဆုံးဖြစ်တဲ့ တရုတ်လူမျိုးတွေက မြန်မာပြည်ကို မြန်သရန့်လို့ပဲ သိနေကြပါတယ် … ဂျပန်ကိုပြောပြတော့ ဘိရုမာလို့ ပြောလိုက်တော့ သိတယ် … အိန္ဒိယကလူတွေကိုတော့ မြန်မာလို့ပြောလိုက်ရင် တန်းသိတာပဲ …
ကြည့်ရတာတော့ အင်္ဂလိပ်စာကို အဓိကထားသင်ကြားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ မြန်မာ သို့မဟုတ် ဘားမားလို့ပြောလိုက်ရင် သိပေမယ့် မဖွံ့ဖြိုးမတိုးတက်သေးတဲ့ အာရှတိုက်မှာတော့ သူတို့အသံထွက်ဖြင့်သာ သိနေတာဆိုတော့ ကျွန်မတို့လေယူလေသိမ်းကို နားမလည်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ် ….
ဆူး မိဘ တွေ ဟိုးအရင်တုန်းက ဗုဒ္ဓဂါယာ သွားတုန်းက.. ၉၆ လောက် သွားတာ..
ဘယ်နိုင်ငံကလဲ မေးတော့ မြန်မာ ဆိုတော့.. ခေါင်းလေးငြိမ့်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုပြီး သူတို့ ရွတ်တယ်.. ဒီနာမည်ကို သိတယ် ဆိုတော့.. ကြားရတာ ဝမ်းသာသွားတယ်။
ခွင့်ပြုတယ် ခွင့်လွှတ်တယ် အပြစ်မမြင်ပါဘူး
ကျနော်ကတော့ မြန်မာဆိုတာ သူတိုနေတဲ့နိုင်ငံပါလို့ပြောရင် အားလုံးနီးပါသိနိုင်တယ် ထင်လို့ပါ တခြားအဘပုပြောတဲ့ ပုံစံတွေအနေနဲ့လဲ သိနိုင်ပါဒယ်….
mian dian လို့ပြောတော့ zhong guo ရဲ့ တစ်စိတ်တဒေသ/ လက်အောက်ခံနယ်မြေ/ လို့ ထင်သွားမှာလဲ ဆိုးဒယ်လေ အဲ့သဟာကြောင့်ဘာဂျာ…. အရေးကြီးတာက သဂျီးမင်းဟိုးတုန်းကပြောခဲဖူးတဲ့ ကုန်ကျစရိတ်လေ…… အဲ့ဒါ အဲ့ဒါ
ချာတူးဂ မြန်မာနိုင်ငံဂ ဗမာလူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ပါဂျာ
မြန်မာနိုင်ငံ & ဗမာလူမျိုး